Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo la kulmay Saraakiil ka tirsan DF | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland oo la kulmay Saraakiil ka tirsan DF
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ee Jubbaland Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud oo kormeer shaqo oo afar maalmood qaatay ku tagay deegaanada Waqooyi ee magalada Kismaayo, deegaanada uu Madaxwayne ku xigeenku kormeerka ku tagay ayaa waxaa ka mida Sanguuni, Wirkooy, Buulaguduud Yoontooy iyo Goobwayn.
Madaxweyne ku-xigeenka labaad ayaa sidoo kale kormeeray xerooyinka ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanadaas.
U jeedka kormeerkaan ayaa darnaa sidii loogu kuur gali lahaa xaaladda amni iyo nolosha dadweynaha ku nool deegaanadaas, maadama qayba ka mid ah deegaanada Jubbaland ay ka jiraan abaaro saameeyay dad iyo duunyaba.
Madaxwaynaha ayaa sidoo kale shirar kala duwan la qaatay Saraakiisha ciidamada dowladda Federaalka iyo maamulada deegaanadaas oo uu kala hadlay xaaladda guud, isagoona warbixinno kala duwan ka dhagaystay Saraakiisha ciidamada iyo ururada bulshada.
Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa sidoo kale gaarsiisay gurmad raashin ah oo lagaga jawaabayo abaarihii ka dhacay deegaanada uu madaxweynahu kormeerka ku tagay.
Maqaal horeCiidanka Kenya oo xiray Garoon diyaaradeed oo ku yaalla Gobolka Gedo
Maqaal XigaFaah faahin:-Muwaadin Soomaaliyeed oo lagu dhex dilay goobtiisa Ganacsi